Bato reTransform Zimbabwe Ropeta Chirongwa Chekutsvaga Vacharimiririra muSarudzo
Mutungamiri weTransform Zimbabwe VaJacob Ngarivhume
Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe nemusi weChitatu rakazivisa mazita evanhu gumi nevana vachakwikwidza musarudzo dzeNational Assembly pasi peMDC Alliance uye rinoti pachaitwa sarudzo dzekutsvaka vamwe vashanu kuti vazadzise zvigaro gumi nezvipfumbamwe zvavakapihwa muMDC Alliance
Garwo rakaburitswa nemunyori webato iri, VaMoses Nkomo, rinoti mutungamiriri webato iri, VaJacob Ngarivhume, vachakwikwidza kuBikita East kuMasvingo.
Mutauriri webato iri, VaJustin Makota, vachamirira MDC Alliance kuMasvingo South, VaThomas Magaya vachamira kuChipinge Central, uye VaBenard Tandi vachamira kuChirumanzu Zibagwe.
Vamwe chamirira bato iri pasi peMDC Alliance ndaVaReuben Zhiva kuGokwe Mapfungautsi, VaAbisha Saurombe kuHarare South, VaTichaona Makara kuHwedza North naVaGeorge Mupedzegwa Dube kuMberengwa South.
Bato iri rinoti pachaitwa saurdzo dzemaprimary dzekutsvaga vachamirira bato iri kuMt Darwin South ne Muzarabani North ku Muzarabani South, Zvimba South neGokwe Sengwa.
Mutauriri webato iri, VaJustin Makota, vaudza Studio 7 kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi 24 mwedzi uno usati wasvika.
TZ ibato rechipiri pamapato ese manomwe ari muMDC Alliance kuzivisa vachamirira musarudzo dzegore rino zvichitevera bato reMDC inotungamirirwa naVaWleshman Ncube iro rakazivisa nhengo dzicharimirira musarudzo svondo rapfuura.
Bato iri rinoti harisi kufara nenyaya yekuti vamwe vari muMDC Alliance vakaita seMDC T inotungamirirwa naVaNelson Chamisa iro rinonzi rakati richadoma nhengo dzaro kuti dzirimirire MDC Alliance mumatunhu akapihwa Transform Zimbabwe akaita seMberengwa South neWest.
Sachigaro veMDC- T, VaMorgan Komichi, vanoti bato ravo richatevedza chibvumirano charakaita nemamwe mapato chemuMDC Alliance.
MDCT- T ine maconstituency zana negumi nemana pazvigaro mazana maviri negumi zvinokwikwidzwa muNational Assembly.
Zvichakadai mutauriri wePeople’s Democratic Party, VaJacob Mafume, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kunge vapedza kusarudza vanhu vachamirira bato iri muMDC Alliance svondo rino.
PDP ine maconstituency gumi nemaviri muMDC Alliance. Bato reMultiracial Christian Democrats rinoti rakatosarudza vanhu vana vacharimirira uye richazivisa mazita avo munguva pfupi inotevera.
MDC – T inotarisira kupedza chirongwa chekusarudza vachamirira bato iri mukupera kwesvondo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuti Zimbabwe People First ne Zanu Ndonga kuti tinzwe kuti vave papi nehurongwa hwekusarudza vachamirira mapato aya musarudzo.